BOOSAASO: Qaraxa lala eegatay Ciidamo u socday deegaanka Af-urur – Radio Daljir
BOOSAASO: Qaraxa lala eegatay Ciidamo u socday deegaanka Af-urur
Oktoobar 17, 2021 11:07 b 0
Wararka naga soo gaaraya deeganka Sugurre ee duleedka Magaalada Boosaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa sheegaya in kolonyo Ciidamada Puntland ah oo kusii jeeday deeganka Afurur qarax miino lagula beegsaday halkaasi.
Qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari oo kamid ahaa Ciidamadii gaariga saarnaa, qaraxa kadib ayay Ciidamadu fureen rasaas xoogan oo aan cidna waxyeelo gaarsiin.
Qaraxan lala beegsaday ciidamada Puntland ayaa kusoo aadaya xilli saaka waaberigii Al-Shabaab ay weerar madaafiic ah ku qaadeen Saldhiga degaanka Af-urur ee Gobolka Bari, sida ay ku daabaceen Warbaahinta ku hadasha afkooda.
Dowladda ilaa iyo haatan wax faahfaahin ah kama ayasan bixin warkan.
SAHANKA DALJIR & DDS (daawo)